အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီ… – PVTV Myanmar
·7months ago ·16 Comments
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနတို့၏ အင်တာနက်စာမျက်နှာ (Website) များထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ သတင်း
CRPH – CDM Supporting Team က နိုင်ငံအနှံ့ရှိ CDMဝန်ထမ်းများအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရက ကြေညာချက်အမှတ် (၅/၂၀၂၁) ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်း
ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်းကျင်းပသော ၄၇ ကြိမ်မြောက် G7 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးက စစ်တပ်၏အာဏာသိမ်းမှုကို ရှုံချပြီး ဖမ်းဆီးထားသူများကို ချွင်းချက်မရှိပြန်လွှတ်ရန် တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်း စတဲ့ သတင်းတွေကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 9.6K Share – 803
Sūñ Sĥiñë says:
ဒီ အရေတော်‌ပုံ အောင်ကို အောင်ရမယ် ကျတော်တို့ အရင် ‌ေခတ်တေ ပြန်မသွားချင် ြတိဂံ လေးသေးသေးလေးမှာ ပိုက်ဆံ ပါ ထည့်ပေါင်းတဲ့ စနစ် ဆိုးကို တွန့်လှန်ချင်ပိ NUG အနေနဲ့လဲ ပြည်သူတေ သွေးမအေခင် တခုခု ပါ
Khant Chaw Kyi says:
2021-06-14 at 8:22 PM
ပြည်သူ့ အတွက် အမှန် သတင်း တွေ နားထောင် ရတာ တန် ဖိုး ရှိ ပါတယ်ဗျာ
Mwe Mwe Chit says:
Pvtv မဂၤလာပါ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ရမည္ ။
2021-06-15 at 2:04 AM
CDM မီးရထားဝန်ထမ်းမိသားစု၁၆စုအကူထောက်ပံ့စရိတ်မရရှိကြပါဟုအကူညီတောင်းနေပါတယ် CDM များစားစရာမရှိဒုက္ခရောက်နေပါတယ်. WA Australia နိုင်ငံမှ မြန်ပြည်မှCRPH and CDM အတွက် အလှူငွေအပတ်စဥ်လစဥ်အဆက်မပြတ်ကောက်ခံနေသူများမှ NUG အစိုးရနီင်ပူးပေါင်း၍CDM အလုပ်သမားအကူညီအထောက်အပံ့မရသူများကိုကူညီပေးကြပါလို့မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်
2021-06-15 at 11:13 AM
Sint Sint says:
2021-06-15 at 2:22 PM
2021-06-15 at 5:01 PM
2021-06-16 at 6:42 AM
မဂ်လာပါ PV TV အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်
2021-06-16 at 6:49 AM
2021-06-16 at 10:25 AM
PVTV. Thank you.
2021-06-16 at 8:03 PM
2021-06-18 at 8:26 PM
2021-06-21 at 1:37 PM
မလေးရှားရောက် ကျွန်တော်တို့ နှလုံးလှပရဟိတအသင်း ( Lovely Heart ) ကွာလာလမ်ပူမြို့မှ ဦးဆောင်၍ မလေးရောက်ရွှေမြန်မာများရဲ့ အလှူငွေတွေနဲ့ အာဏာစတင်သိမ်းပြီး ကတည်းက တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ CDM, တော်လှန်းရေးသပိတ်အဖွဲ့များ,စားနပ်ရိက္ခာ,စစ်ရှောင်မိဘပြည်သူများ နဲ့ မိးဘေး ကအစ အခုထိတိုင် လှူဒါန်းပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာ… CDM လုပ်ပြီး ဘာမှမထောက်အပံမရတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေလည်းများနေပါသေးတယ် အမြန်ဆုံး NUG အနေနဲ့ ပိုပြီးထိရောက်စွာနဲ့ စီမံခန့်ခွဲပေးစေချင်ပါတယ် နိုင်ငံခြားတိုင်ပြည်များမှ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံချစ်စိတ်နဲ့ လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်း NUG မှကိုယ်တိုင်စုံစမ်းပြီး အသိအမှတ်ပြုစေချင်ပါတယ် ဒါမှသာ အားအင်အပြည့်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ညီညွတ်စွာတွန်းကြရင်ဖြင့် အာဏာရူးတို့အား အမြန်ဆုံးခြေမှုန်းနိုင်လိမ့်မည်ဟု အကြံပြုပါစေခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးလည်း ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ဆက်လက်ကြိုးစားပါအုံးမည် အာဏာရှင် လူသတ်ကောင်စီအမြန်ဆုံးကျရှုံးပါစေ အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ Lovely Heart Philanthropic Young Blood Donor Organization ( Kuala lumpur Malaysia )
Mc Zet says:
2021-06-22 at 8:52 AM
ကျနော် တို့ အဖမ်းမိ ခံ ၅၀၅-က တွေအတွက် အလှူခံလိုပါတယ် ငွေအင်အားအရမ်းလိုအပ်နေပါတယ် အလှူရှင်တွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်
ကျနော်ကိုယ်တိုင်က လည်း Defenseသမားပါ
K pay 09953910480
Wave pay 09668584310(mytelသုံးရခြင်းမာ wave 2တင်းထားရသောကြောင့်သာဖြစ်သည်)
ဒီနေ့ဟာ တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေက ချေလို ခေါ်ကြတဲ့ ကျူးဘားတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင် ချေ…